On the usizo ngesandla esisodwa ukuze ukudla ukunciphisa umzimba, ngakolunye uhlangothi, ukuletha asemrarweni, kungcono into eyodwa ukuba anciphise umzimba, kanye nezinye, ukuze silondoloze isisindo entsha. Ukulahlekelwa isisindo sonke isikhathi ukhuluma ngani lokho okudingeka uqale ukudla ngendlela efanele, futhi mayelana ukudla kanye akazange akhohlwe. Kodwa ungakwenza kanjani ukukhohlwa ngazo, uma bavumela ukuba ufinyelele ngokushesha uphawu oyifunayo esikalini! Yebo, ukuthola ukudla okuhle akulula kakhulu. Futhi uma ungakwazi? Nokho, ngemva kokufunda mayelana Ukudla Japanese, ngineminyaka engu Emangazwe ukuthi wathembisa Abadali zayo.
Ukudla Japanese isisindo ukulahleka yasungulwa abasebenzi esibhedlela Japanese. Iyaduma ezweni ngaselangeni njengoba liphuma, ekudleni kancane kancane landizela wonke amagumbi wonke, kuhlanganise eRussia. Ngokuvamile, mayelana Japanese uyakhumbula ngaphandle igama, ngoba imenyu Ukudla ilula futhi ziyehlukahluka, kanti futhi yonke imikhiqizo kulula ukuthenga nganoma iyiphi esitolo. Onjiniyela, udala umgomo Ukudla kwaba beveza ukudla esiza ekulawuleni umzimba futhi ukushintsha imikhuba yokudla. Uma ukholwa ukuthi ekudleni Japanese izinsuku 13, nokuthi singakanani kuthatha, hhayi kuphela kuyasiza ukunciphisa umzimba, kodwa usigcine leso yalokho, okungenani iminyaka engu-3.
Ngaphambi kokuba uqale ukudla, kudingeka alungiselele emzimbeni wakho. Ukuze wenze lokhu, ngosuku olwandulela usuku lokuqala ekudleni ukukhohlwa mayelana okukhona futhi wenze ngokwakho into efana nokusingatha ngosuku. Qiniseka ukuthi ukudla kwakusihlwa, lapho okufanele kwenzeke ngayo ngaphambili 18,00, udinga ukudla ingxenye encane yemifino isaladi nocezu ephansi fat inyama. Kungcono uma kuyoba webele inkukhu. Kufanele ukuzibizela nasengqondweni. Akunakusetshenziswa Ngeke kuwele emuva ku maphakathi, kusukela Ukudla Japanese izinsuku 13 isebenza kuphela uma uhambe ngalo kusukela ekuqaleni kuze kube sekugcineni. Kufanele kuqashelwe ukuthi amamenyu Ukudla bakhethwa ngokucophelela ukuze ukwazi ukusebenzisa kuphela labo imikhiqizo ahlelwe kuwo. Ngisho noma kubonakala sengathi into ungakwazi ukushintsha analog ukwenza lokhu akukwazi, kungenjalo Ukudla Japanese izinsuku 13 nje ukuyeka ukusebenza.
Khathesi-ke sengileluleka ukuniqaphelisa ngqo kakhulu ekudleni. Ngivumele iphawule yakho yokuthi zonke izinsuku 13 kuyodingeka bayakhohlwa usawoti, ushukela, imikhiqizo ufulawa utshwala, ngakho uma kungenzeka, kungcono ukugwema emadilini kanye kuyiwe izivakashi.
Ukudla Japanese izinsuku 13, imenyu:
Isidlo sasekuseni: yemvelo (! Unground) ikhofi black.
Isidlo sasemini: amaqanda 2 abilisiwe, 200 of yemifino isaladi (iklabishi fresh ngamafutha yemifino), ingilazi utamatisi fresh noma utamatisi juice.
Dinner: 150 g abilisiwe fish nemifino isaladi iklabishi ngamafutha zemifino.
Isidlo sasekuseni: zemvelo ikhofi abamnyama bhisikidi.
Isidlo sasemini: 150 g izinhlanzi abilisiwe (futhi kungenziwa ethosiwe), 200 of iklabishi ulethisi yemifino ne amafutha zemifino.
Dinner: 200 of yenkomo abilisiwe nendebe yogurt.
Isidlo sasekuseni: zemvelo ikhofi black.
Isidlo sasemini: iqanda elilodwa, 3 izaqathe amakhulu abilisiwe, ayoliswe amafutha zemifino.
Dinner: ama-apula amabili.
Isidlo sasekuseni: yemvelo black coffee
Isidlo sasemini: 1 ezinkulu parsley noma Parsnip ethosiwe emafutheni zemifino, 1-2 apula aphakathi.
Dinner: amaqanda 2 abilisiwe, 200 of yenkomo abilisiwe 150 g yemifino isaladi ahlanzekile, ayoliswe amafutha.
Isidlo sasekuseni: izaqathi eluhlaza ogayiwe, ayoliswe kalamula.
Isidlo sasemini: 250-300 g abilisiwe (kungenziwa ethosiwe) inhlanzi nendebe utamatisi juice.
Dinner: 100 g abilisiwe (kungenziwa ethosiwe) 200 zezinhlanzi kanye isaladi ahlanzekile ngamafutha.
Isidlo sasemini: 300 g inkukhu abilisiwe 150 g isaladi ahlanzekile noma izaqathi eluhlaza.
Dinner: amaqanda 2 abilisiwe, 150 g isaladi nezaqathe egcwele amafutha zemifino.
Isidlo sasekuseni: green tea.
Isidlo sasemini: 200 of yenkomo abilisiwe, apula 1-2.
Dinner: 150 g izinhlanzi abilisiwe (futhi kungenziwa ethosiwe), 200 of iklabishi ulethisi yemifino ne amafutha zemifino.
Kusukela ngosuku 8, ekudleni kufanele liphindwe kanje: 8 usuku kokubili 6 nele-9 njengoba 5, 10 njengoba 4, 3 njengoba 11, 12 njengoba 2, 13 njengoba 1.
I Onjiniyela athembisa ukudla kwesisindo kule Ukudla-8 kg. Phuma kusukela ekudleni Japanese kufanele kube bushelelezi. Musa ngokushesha ngazo zonke okumnandi. imikhiqizo Everyday yethulwe kancane, siqiniseke ukuthi, ngemva kokudla uzizwa ukugcwaliswa kancane ukudla, kodwa hhayi kakhulu uma sezidla.
Ukudla esiphambanweni. Ithanga ku Cinderella futhi emuva